Home YURUB IYO YURUB Sheekada Carruurnimada Aaron Connolly Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarin
Sheekada Carruurnimada Aaron Connolly Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin. Sawirka Sawirka: PremierLeague iyo Twitter
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan magaca ugu wanaagsan "Darwiishku". Sheekadeena Aaron Connolly Childhood Plus iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold wuxuu kuu keenayaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa caruurnimada ilaa taariikhda.
Noloshii iyo Sare Tagida Aaron Connolly. Dhibcaha Sawirka: Telegraph, Independent iyo Twitter
Haa, qof walbaa wuu ogyahay inuu ahaa da 'yartaas qaaliga ah ee ka hoos dhacday Spurs bilawgiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League ee xilli ciyaareedkii 2019 / 2020. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya taariikhda nololeed ee Aaron Connolly oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bilaabista, magaciisa oo buuxa waa Aaron Anthony Connolly. Aaron Connolly wuxuu ku dhashay maalinta 21st ee Janaayo 2000 hooyadiis, Karen Connolly iyo aabihiis, Mike Connolly oo ku taal Oranmore, oo ah magaalo ku taal Jamhuuriyadda Ireland. Connolly wuxuu ahaa cunugii ugu horreeyay ee ay dhalaan waalidkiisa jecel ee Irish ee ku sawiran hoosta.
La kulan Aaron Connolly waalidiinta Karen iyo Mike. Astaanta Sawirka: Independent
Aaron Connolly wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa Oranmore, magaalo ku taal County Galway, galbeedka Ireland. Meesha uu ka yimid waxaa badanaa loogu yeeraa Wadnaha Dhaqanka ee Ireland, oo ah meel caan ku ah qaab nololeedkeeda firfircoon iyo dabaaldegyada damaashaadka badan.
Muuqaal qurux badan Oranmore ee Galway County, Ireland- halkaasoo Aaron Connolly uu ka yimid. Ku mahadsanid Irelandbeforeyoudie
Aaron Connolly kuma soo barbaarin asal qoys hodan ah. Waalidkiis waxay la mid yihiin dadka intooda badan oo sameeya celcelis ahaan shaqooyinka Irish laakiin waligood kuma dhibto lacag sidii ay u sii hayn lahaayeen qoyska. Sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta bulshada, Aaron Connolly wuxuu ku soo koray walaalkiis oo la yiraahdo Ethan Connolly kaasoo isaga oo kale ah, sidoo kale wuxuu noqday ciyaartoy kubada cagta ah.
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Waalidiintii Aaron Connolly waxay markii hore rabeen in wiilkooda uu noqdo aqoonyahan aan wax fikrad ah ka haysan inuu waligiis ka dhigi doono ciyaaraha. Xiligaas, Connolly wuxuu ku saabsanaa dadaalkiisa aqooneed ee Dugsiga Sare ee Brierhill oo ku yaal bariga Galway. Intii uu iskuulka ku jiray, wuxuu isha ku hayey garoonka kubada cagta agtiisa iskuulka oo uu inta badan ciyaaro kubbada cagta kadib markii uu dhameeyay fasalada.
Macalin hore u ahaa Iskuulka Qaranka ee Brierhill kaas oo magacooda la yiraahdo Conor Hogan wuxuu xasuustaa wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Aaron Connolly inuu yahay wiil yar oo xiran lahaa jaakadaha kubbadda cagta ee duulaya hareeraha kubbadda cagta isla markaana taabanaya kubbadda cagta, iyadoo aan loo eegin xaaladda cimilada.
Aaron Connolly waayihiisii ​​hore ee dugsiga dhexe ee Brierhill. Sawirka Sawirka: Twitter
"Waxaan halkaas macallin ku beddelay muddo lix bilood ah waxaanan xasuustaa in fasalkiisu lahaa ku dhawaad ​​30 wiilasha Aaron Connolly wuxuu ka mid ahaa wiilal aad u tiro yar oo aad u waalan isboorti." Conor Hogan, Macalinkiisii ​​hore ee Aaron ayaa dib looga yeerayaa.
Markii uu ahaa halyeey da 'yar, Aaron Connolly wuxuu bartay ganacsigiisa kubada cagta inuu yahay weerar adag, oo isdaba-joog ah. Waqti qaar, waxay ku dhacday waalidkiis taas marna shaki badan kama qabin in Haaruun uu ku socday jihada saxda ah. Ugu dambeyntiina, kibirka xubnaha qoyskiisa Aaron Connolly iyo macallimiinta iskuulka ayaan ogeyn wax xaddidan markii lagu martiqaaday inuu ka qeybgalo tijaabooyinka Mervue United.
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' Nolosha Mudnaanta Hore
Sannadkii 2011, Aaron Connolly wuxuu u dhaqaaqay kooxda Galway naadiga ugu sarreysa ee Mervue United halkaas oo laga aqbalay akadeemiyadda kadib markii uu tijaabiyay tijaabooyin midabyo duulaya. Fahmitaanka rabitaanka wiilkooda ee kubbadda cagta nololeed, waalidiinta Connolly waxay sameeyeen wax kasta oo ay karaan si ay u taageeraan himilooyinkiisa.
Aaron Connolly Life Career Life. Ku ammaano Twitter
Waqti badan kama qaadin Aaron Connolly inuu la qabsado oo uu bilaabo inuu aragti ka sameeyo akadeemiyada isla markaana uu ku guuleysto sharaftiisa ciyaareed ee ugu horreysay (kor eeg). Wuxuu si dhaqso leh kor ugu soo kacay safka waxaana lagu casuumay inuu ka qeyb galo dhowr tartamo isboorti.
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' Waddada loogu talagalay sheekada
Aaron Connolly sheekadiisa guushii ugu horreysay ee kubada cagta ayaa timid tartan gaar ah markii uu dhaliyay 18 jeer isagoo ah 15-sano jir. Guusha whizkid wuxuu arkay isaga oo ka caawinaya kooxdiisu inay ku guuleysato koob maxalli ah taasoo micno weyn ugu fadhida waalidkiis.
Aaron Connolly Wadada sheekada Fanka. Ku mahadsanid Independent
Guulihii uu gaadhay, wuxuu noqday ciyaariyahanka ugu wanaagsan kaniisadda Castlegar, Galway, Ireland. Muuqaalkaani wuxuu kaloo fursad u helay inuu qiimeeyo kooxaha ugu sareeya kubbadda cagta Ingiriiska oo uu ka mid ahaa Brighton.
Sannadkii 2016, ayuu Aaron Connolly go’aansaday ku sii wado howshiisa qaan-gaarnimada ee dibedda. Tani waxay ahayd waqti uu sameeyay a u gudub dhanka Badda Irish, kuna biira Brighton & Hove Albion oo isagu ku casuumay maxkamad ka dib markii uu arkay bandhigiisii. Waxa uu soo jiitay indhaha ku filan inta lagu jiray tijaabadiisa iyo kooxda inay u fidiyaan deeq waxbarasho oo labo sano ah. Sanadkaas 2016, waxaa sidoo kale lagu casuumay inuu metelo Ireland U17 wuxuuna kaqaybqaatay Irish School FA Cup oo uu ku guuleystay.
Aaron Connolly ka dib markii uu ku guuleystay koobka 'Irish Schools FA Cup'. Astaanta Muuqaalka TheArgus
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' Kusoo sharax sheekada
Aaron Connolly wuxuu ka koray xoog iyo xoog xagga naadiyada iyo naadiga kubada cagta. 2017, wuxuu noqday gooldhaliyaha ugu sareeya gooldhalinta isreebreebka 2017 UEFA European Under-17 Championship, isagoo dhaliyay toddobo gool lix kulan.
Waxqabadka ayaa ka dhigay inuu si dhakhso leh ula socdo Brighton & Hove Albion ee ka hooseeya 23 dhinaca halkaas oo uu saftay kulankiisii ​​ugu horeysay kaliya da'da sideed iyo toban. Ma ogeyd?… Kooxda Under-23 waxay u noqotay guusha isaga sidii uu ahaa oo loo magacaabay cayaaryahanka sanadka ee 2018 / 2019 Premier League-ga-23-ka, isagoo dhaliyay 11 jeer.
Aaron Connolly- Horyaalka Premier League2 2018-2019 Cayaaryahanka Abaalmarinta Xilliga. Dhibcaha: Twitter
Ku guuleysiga abaalmarintaas weyn waxay qaadatay dareenka maamulaha kooxda Graham Potter kaasoo dhaqaaqay ku laabashadiisa Brighton ka dib amaah uu uga yimid Luton Town.
Aaron Connolly wuxuu u adkaystay kor u qaadida sareysa ee sumcadda ku socota Maalinta 5 bisha Oktoobar ee ciyaar la ciyaareysa Tottenham halkaas oo uu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League, isagoo dhaliyay labo jeer guulihii 3 – 0. Hoos waxaa ku yaal gabal ficil muuqaal ah. Credits ka SpursTV.
Ma ogeyd?… Goolashaas ayaa Connolly ka dhigay 100th Irishman inuu dhaliyo gool Premier League ah iyo cunuggii ugu horreeyay ee gool u dhaliya Brighton heerka Premier League.
Aaron Connolly wuxuu u dabaaldegayaa goolkiisii ​​caanka ahaa ee uu ka dhaliyay Spurs. Dhibcaha: Madaxbanaan
Shaki la'aan, cunugga yaabka leh ayaa u caddeeyey taageerayaasha kubada cagta in safka wax soo saarka ee Ireland uu yahay weeraryahano HADDII MA AHAY!. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' Nolosha Xiriirka
Waxaa ka dambeeya nin kasta oo guuleysta, naag baa jirta. Kubbad sameeye sida Connolly, runti waxaa jira WAG qurux badan… taas oo loola jeedo saaxiibtiisa quruxda badan ee ku magac baxday Lucinda Strafford. Sida lagu muujiyey akoonkiisa warbaahinta bulshada, labada jaceyl waxay bilaabeen inay wada-xiriiraan Janaayo 2019.
Aaron Connolly's Gabadha Quruxda badan leh- Lucinda Strafford. Ku amaanto barta Instagram
Lucinda Strafford shaki la'aan waa giirte qurux badan oo kalsooni ku qabta mid kasta oo ka mid ah dabinkeeda. Iyadu waa qof aan is jeclayn oo aan wax shaqo ah qabin mooyaane siinta taageerada shucuureed ee ninkeeda xitaa taas micnaheedu waa iyada oo nafteeda ku haysa.
Aaron Connolly wuxuu leeyahay gabar aad u taageero. Amaahda IG
Mid ka mid ah labada qof ee ay jecel yihiin xagaaga xilliga xagaaga waa jasiiradda Spanish Tenerife iyo biyaha Ibiza. Sida hoos ku xusan, Lucinda waxay aad ula dhacsan tahay Aaron Connolly, oo ay badanaa u jeediso "amiirkeeda".
Aaron Connolly wuxuu ku raaxeysanayaa doon la raaco saaxiibtiis- Lucinda Strafford
Aaron Connolly iyo saaxiibtiis Lucinda ayaa hadda uun ku dhow inay noqdaan labada lamaane ee sida aadka ah loo aasaasay ee Brighton & Hove Albion Football Club. Xaqiiqada ah in labadoodaba ay wada sheekeysanayeen muddo hadda waxay shaki la'aan gelineysaa in aroos uu noqon karo tallaabada rasmiga ah ee xigta.
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' Naftaada Shaqsiga
Inaad barto Aaron Connolly Shaqsiyada Nolol ahaan ka fog inaad ku aragto isaga oo ku sugan garoonka dhexdiisa wuxuu kaa caawin doonaa inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah.
Aaron Connolly Xaqiiqda Nolosha shaqsiga. Amaah: Twitter
Adoo ka fekeraya sawirka kore, waxaad ogaan doontaa in Aaron Connolly uu yahay qof firfircoon oo firfircoon oo jecel inuu ku farxo waxa uu haysto. Wuxuu u arkaa inay si fudud ula qabsan karto tamarta ku xeeran oo maskaxdiisa u adeegsanaysa fursad kasta.
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' Nolosha Qoyska
Aaron Connolly wuxuu ku faraxsan yahay inuu been abuuray dariiqii qoyskiisa ee madaxbanaanida dhaqaalaha isagoo uga mahadcelinaya kubada cagta. Laga soo bilaabo yaraantiisii ​​yaraantiisii, waalidkiis waxay ciyaareen kaalintii caadiga ahayd ee loogaga faa'iidaystay fursad kasta oo ay ku arkaan isagoo ciyaaraya dhamaan kulamadiisa.
Aaron Connolly wuxuu la jiraa waalidkiis taageeraya ka dib markii uu koob kula guuleystay.
Mike iyo Karen labaduba waxay qabteen duulimaad hore si ay u arkaan wiilkiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League iyo labada gool ee ugu horreeyay. Sida Connolly uu qaaday ficilka, Aabihiis kibirka ah wuxuu ogaa in wiilkiisa ugu dambeyntii rumoobay riyadiisii.
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' nololeedka
Inaad ogaatid sida qaab nololeedka Connolly ee la xiriira sida uu u bixiyo lacagaha uu kaa caawinayo inaad hesho sawir wanaagsan oo isaga ah.
Bilaabista, go'aaminta udhaxeysa ficil ahaan iyo raaxeysiga waqtigan xaadirka ah ma ahan xulasho adag oo ku saabsan cunugga Whiz. Lacag ka sameynta kubbadda cagta waa shar shar ah oo loo baahan yahay laakiin ku qarash gareynta saaxiibtiis Lucinda Strafford markay booqanayaan tusaalayaal qurxoon tusaalayaal; ( Jamaica, St Lucia, Mauritius, Ibiza, Antigua iyo Las Vegas) u muuqataa isaga, qaab nololeed caadi ah.
Aaron Connolly Xaqiiqooyinka Nolosha. Amaahda IG
Nolosha Aaron Connolly ma ahan mid qalaad sidii qofku u maleynayay ka dib markii uu fiiriyo sawirka kore. Waxay umuuqataa inuu wali salka ku hayo sidii loo ilaalin lahaa dhaqaalahiisa loona habeyn lahaa. Sida wakhtigii qorista, ma jiraan wax calaamado ah oo muujinaya Connolly muujinaya baabuurta flashy / qalaad, guryo waaweyn, wristwatch qaali ah iwm.
Sheekada Carruurnimada 'Aaron Connolly' Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Modelkiisa: Sida ciyaartoy badan oo Irish-ka ah, Connolly wuxuu jecel yahay halyeeyga Irish, Robbie Keane oo isagu la barbar dhigo. Wuxuu ku hagaajiyay isaga oo noqday da’yarkii ugu horreeyay ee Irish ah (tan iyo Robbie Keane ee 1999) si loo helo geesinimo ciyaar sare ee Ingiriisiga ah. Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah farsamooyinkiisa gooldhalinta kaasoo loo barbardhigo Legendary Robbie Keane. Dhibcaha VTSports
Wuxuu u maleeyay in wicitaankiisa sare ee Ireland ay tahay mid run ah: Toddobaad uun ka dib geesinimadiisii ​​uu ka qaatay Spurs oo u keentay nin bandhig muuqaal ah, Aaron Connolly, Wakhti ka dib maalintaas waxaa casuumaad ka helay macallinka sare ee xulka Ireland Mick McCarthy kulanka isreeb-reebka Euro soo socda ee xulalka Georgia iyo Switzerland. Wuxuu dareemay inay tahay prank ka dib markii loo sheegay warka. Inta soo hartay, sida uu arkay, waxay noqdeen taariikh.
Aaron Connolly wuxuu la sheekaystaa macallinka reer Ireland Mick McCarthy maalin uun ka dib markii loogu yeeray xulka qaranka Ireland. Amaahda Sportsfile iyo Independent
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay Akhriskayaasheena Aaron Connolly Childhood Story oo ay weheliso Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Buugga xusuus-qorka ee Irish
YURUB IYO YURUB342